म्याकोएस उच्च सियरामा जोखिमले प्रशासकलाई म्याकमा पहुँच दिन्छ। हामी तपाईंलाई अस्थायी समाधान देखाउँदछौं ग्याजेट समाचार
म्याकोएस उच्च सियरामा जोखिमले प्रशासकलाई म्याकमा पहुँच दिन्छ। हामी तपाईंलाई अस्थायी समाधान देखाउँदछौं
म्याकोस, पहिले ओएस एक्स, म्याक अपरेटिंग प्रणालीको रूपमा चिनिन्थ्यो, कमसे कम सिद्धान्तमा, कम्प्यूटर इकोसिस्टममा एक सुरक्षित हुनको लागि विन्डोजको साथ रहेको छ जुन सँधै सबैभन्दा ठूलो समस्याहरू प्रदान गर्दछ। तर यो पूर्ण रूपमा सत्य होईन, किनकि विन्डोज र लिनक्सको बिभिन्न प्रकारहरु जस्तै म्याकोस, ती सबैसँग सुरक्षा प्वालहरू छन्।
भर्खरको एउटा पत्ता लगाईएको छ र जसले यस भित्र भण्डार गरिएको डाटालाई धेरै महत्त्वपूर्ण जोखिम दिन्छ, म्याक्सलाई असर गर्छ जुन म्याकोस उच्च सियराको पछिल्लो संस्करण चलाइरहेको छ। यो जोखिमले हामीलाई पाहुना खाताबाट प्रशासक मोडमा पहुँच गर्न अनुमति दिन्छ, एक खाता जुन सामान्य रूपमा योसँग सामान्यतया पासवर्ड हुँदैन, त्यसैले यसको नाम। एक पटक हामीले पहुँच गरिसकेपछि, हामी प्रशासक पासवर्ड परिवर्तन गर्न सक्दछौं कुनै पनि समय यो थाहा बिना नै, किनकि यसले हामीलाई व्यवस्थापक पासवर्ड परिवर्तन गर्नका लागि विन्डो देखाउँदछ, किनकि हामी माथिको छविमा देख्न सक्छौं।
यो गर्न सक्षम हुन, हामी केवल हाम्रो प्रयोगकर्ता खाताको प्रणाली प्राथमिकताहरूबाट पहुँच गर्न सक्दछौं, तल्लो बायाँ कुनामा अवस्थित प्याड लकमा क्लिक गर्नुहोस्। अर्को हामी शब्द "रूट" प्रयोगकर्ता नामको रूपमा र लेख्छौं तपाईंले स्वीकार नगरेसम्म प्रविष्ट कुञ्जी धेरै पटक थिच्नुहोस्। एक पटक यो प्रक्रिया पूर्ण भएपछि, हामीसँग म्याकको प्रशासक नियन्त्रणहरू छन् जुन हामीले हाम्रो प्रयोगमा प्रयोग गरिरहेका छौं।
यस म्याकोस सुरक्षा मुद्दा फिक्स गर्नुहोस्
समाधान पहिले पाहुना प्रयोगकर्तालाई अक्षम गर्न को लागी हो, प्रक्रिया हो जुन हामीले प्रणाली प्राथमिकता मार्फत गर्न सक्छौं तल विस्तृत रूपमा।
प्रणाली प्राथमिकताहरू भित्र हामी जान्छौं प्रयोगकर्ता र समूहहरू।
भित्र प्रयोगकर्ता र समूहहरू, हामी चयन गर्दछौं अतिथि प्रयोगकर्ता.
त्यसो भए हामी विकल्प निष्क्रिय Pपाहुनाहरुलाई यस कम्प्युटरमा जडान गर्न अनुमति दिनुहोस्।
तर पूर्ण रूपले यकिन हुन र कि यस प्रकारको नयाँ बगहरूले हाम्रो कम्प्युटरमा भण्डार गरिएको जानकारीको सुरक्षालाई जोखिममा पार्न सक्दछ, हामीले मूल पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्दछ, जुन पूर्वनिर्धारितमा "रूट" प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित छ। यो गर्नका लागि, हामी अगाडि बढ्नेछौं:
हामी माथि जान्छौं प्रणाली प्राथमिकताहरू।
थिच्नुस प्रयोगकर्ता र समूहहरू र O चयन गर्नुहोस्स्टार्टअप विकल्पहरू।
त्यसपछि क्लिक गर्नुहोस् नेटवर्क खाता सर्वर, र थिच्नुहोस् खुला निर्देशिका उपयोगिता.
अर्को चरणमा हामी सम्पादन मेनूमा जान्छौं र C चयन गर्दछौंरूट प्रयोगकर्ता पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस्.
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » कम्प्युटरहरू » म्याकोएस उच्च सियरामा जोखिमले प्रशासकलाई म्याकमा पहुँच दिन्छ। हामी तपाईंलाई अस्थायी समाधान देखाउँदछौं
हनीवेलबाट Lyric C1 WiFi, राम्रो मूल्यमा सुरक्षा र अर्डर गर्नुहोस् [विश्लेषण]
अडी एस्केप कोठा आफ्नो इलेक्ट्रिक वाहन टेक्नोलोजी प्रमोट गर्न म्याड्रिडको भ्रमण गर्दछ